Samsung si Galaxy A72 4G nke Samsung ka amachapụla kpamkpam | Gam akporosis
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na Samsung smartphone na-aga ịmalite, nke a ga-abụkwa otu Galaxy A72 4G, nkezi arụmọrụ arụmọrụ anyị maraworị ọtụtụ ihe banyere ya, ebe ọ bụ na nchapu anyị na-ekwu maka ya ugbu a nwere nkọwa dị mkpa gbasara njirimara ya na nkọwapụta isi ọrụ ya, nke bụ ihe anyị na-ekpughe na ohere ọhụụ a maka blog German. WinFuture, mgbe sụgharịrị ihe oyiyi nke mobile ruru @Onwuchukwu
Samsung A72 4G nke Samsung ga - abụ a na mobile na Qualcomm Snapdragon processor chipset na ọ bụghị onye nwere Exynos n'okpuru mkpuchi. Ke adianade do, ya n'ihu imewe bụ ahụkarị perforated ihuenyo na a selfie igwefoto na etiti na emi odude ke n'elu ya. Igwefoto igwefoto azụ bụ nke dị iche na nke ndị ahụrịrịrịrị na ọtụtụ ụdị ụlọ ọrụ ahụ, mana ka anyị bịakwute ya.
Samsung Galaxy A72 4G Leaked Atụmatụ: Gịnị Ka Anyị Pụrụ pecttụ Anya Site na Nke a na etiti-ekwentị?
Iji malite, a na-ekwu ya Galaxy A72 4G agaghị abụ ekwentị dị oke ọnụ ala, ma obughi nke nwere onu ahia. A ga-adọta nke a na obere akara ahụ na mpaghara ọnụahịa dị mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na, maka akara ngosi nke euro 449 nke a ga-ere ụdị nke nwere ikike nchekwa dị ala, onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ njedebe dị elu dị ka Poco X2 Pro ma ọ bụrụ tinye obere ego karịa, ma ọ bụ ọbụlagodi obere ma ọ bụrụ na ekwentị nwere Snapdragon 855, dịka ọmụmaatụ.
Ihuenyo nke njedebe arụmọrụ agaghị adị iche na teknụzụ Super AMOLED nke nwere 6.7 inch diagonal, yabụ anyị anaghị eche ihu obere mkpanaka, mana ọ bụghị nke buru ibu, ebe ọ bụ na bezels na-ejide ogwe ahụ pere ezigbo mpe, nke na-enyere aka idobe akụkụ na nsogbu. E wezụga nke a, ọnụego ume ihuenyo bụ 90 Hz, nke dị elu karịa nkezi nke 60 Hz nke anyị na-ahụ n'ọtụtụ ekwentị mkpanaaka na ahịa, ọ bụ ezie na ọtụtụ na anyị na-ahụ igwe nwere ọnụego ume ọhụrụ a na ọbụlagodi 120 na ruo 144 Hz.
Oghere ihuenyo na-eje ozi dị ka ebe obibi maka ihe igwefoto ihe nmari nke megapixel 32. N'aka nke ya, sistemụ igwefoto azụ dị okpukpu anọ ma mejuputa ihe mkpuchi 64 MP, ebe atọ ndị ọzọ na-eso ya bụ oghere nwere oghere 12 MP maka foto sara mbara, ihe mkpuchi 5 MP maka mmetụta ahụ. ) na 5 MP ọzọ maka nnukwu gbaa. Ihe a niile, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, na - esonye yana ọkụ ọkụ gụnyere.
El Ihe nhazi Snapdragon 720G Ọ ga-abụ ikpo okwu mkpanaka nke na-enye Samsung Galaxy A72 4G ikike. Mpempe akwụkwọ a nwere elekere asatọ ma na - arụ ọrụ na nkeji elekere kachasị nke 2.3 GHz, yana onye na - eme ihe nkiri (GPU) ya bụ Adreno 618. Na nke a, anyị ga - agbakwunye RAM nke 8 GB ọ bụ ezie na a na - ekwukwa na a ga - enwe ụdị. na 6 GB. Esịtidem ohere nchekwa nke ekwentị ga-nyere dị ka 128 na 256 GB; n'otu n'otu, ọnụahịa nke ụdị ọ bụla ga-abụ euro 449 na 509 (ọnụahịa maka Europe).
Leaked oyiyi nke Samsung Galaxy A72 4G
Akụkụ ndị ọzọ dị iche iche echepụtarala n'ime izu ole na ole gara aga na-ekwukwa banyere sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 11 na One UI 3.0 dị ka ndozi nhazi nke ndabere, ọdụ ụgbọ USB-C maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke batrị ikike 4.500 mAh na m ga-enwe ekwentị na nwute na enwere oghere kaadi microSD, yabụ enweghi ike ịgbasa ebe nchekwa dị n'ime.
Bọchị mwepụta nke smartphone ka bụ ihe omimi, ma, nyere ozi niile anyị nwere na ihe oyiyi nke ọnụ, anyị na-achọpụta na ọ dị nso ịmalite. Firmlọ ọrụ South Korea ga-eme ọkwa ọkwa n'oge na-adịghị anya, ya mere nọrọ na-ege ntị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy A72 4G nwere ike ihu na onyonyo ya: mara njirimara ya